Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Amerikanina mbola mandehandeha fa mijanona akaikin'ny trano mandritra ny fialantsasatra
Araka ny tatitra farany, dia efa ho ny antsasaky ny Amerikanina (46%) no mikasa ny handeha ho an'ny fialantsasatry ny Desambra.
Covid-19 dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitry ny dia ary nahatonga ny ankamaroan'ny mpandeha (66%) hampiasa ny fiarany manokana fa tsy manidina na mandray fitateram-bahoaka. Raha mbola mitombo ny tranga virus manerana ny firenena, dia mihena ny isan'ireo Amerikanina mikasa ny handeha ho an'ny fetin'ny Taom-baovao.
Olona maro no mijanona ao an-trano mandritra ny fialantsasatra ho ahiahiana, ary ireo izay mandeha dia miankina amin'ny fiarany manokana ihany. Ho an'ny ankamaroan'ny mpandeha amin'ny fialantsasatra, ny fanapahan-kevitra hitondra fiara dia tsy misy fiantraikany amin'ny vidiny na fanamorana, fa ny fiarovana sy ny filaminana.
Ireo manam-pahaizana momba ny dia dia nanara-maso ny drafitry ny dia nanomboka ny volana oktobra ary tsy nitsahatra nahita fa nihena ny isan'ireo mpandeha ny taona vaovao. Mety hidika izany fa ny olona tsy te-hanome fotoana miaraka amin'ny ankohonany fa azo inoana kokoa fa handany ny fetin'ny Taom-baovao amin'ity taona ity.
Ny fanadihadiana momba ny fialantsasatra farany teo dia nanontany Amerikanina maherin'ny 1,000 momba ny drafitra fitsangatsangan'izy ireo tamin'ny Desambra ary nampitaha ny valiny tamin'ny fanadihadiana momba ny dia Thanksgiving tamin'ny taona 2020.
Ny fironana amin'ny fitsangatsanganana fialantsasatra farany tamin'ny Desambra 2020, araka ny fanadihadiana dia ahitana:
Misafidy fiara mihoatra ny fiaramanidina sy lamasinina ny mpandeha. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpandeha mampiasa fiara manokana (66%), 30% amin'ireo mpandeha fialantsasatra ihany no manidina, miaraka amin'ny 11% no mitaingina lamasinina, 9% mandeha bus ary 7% mampiasa taxi-taxi na taxi.
COVID-19 dia misy fiantraikany amin'ny fitsangatsanganana amin'ny Desambra mihoatra ny Thanksgiving. Ho an'ny Desambra, 66% ny drafitry ny dia nataon'ny Amerikanina no niova noho ny areti-mifindra coronavirus, raha oharina amin'ny 54% voalaza tao amin'ny Thanksgiving.
Vonona ny haneno ny Amerikanina amin'ny 2021 fa mikasa ny hanao fety any an-trano. 33% monja ny Amerikanina no mikasa ny handeha ho an'ny Taom-baovao, mihena amin'ny 41% raha nanontaniana tamin'ny volana Oktobra, mety noho ny fiakaran'ny tranga COVID-19 sy ny fameperana ny fameperana ny dia.
Tanàna lehibe mahita fiakarana amin'ny dia fialantsasatra. Ireo mpitsangatsangana Thanksgiving (44%) dia nanalavitra ireo tanàna lehibe (indrindra ireo tratry ny COVID-19 mafy indrindra), raha oharina amin'ny 28% fotsiny tamin'ireo mpandeha fialantsasatra tamin'ny Desambra. Ny tanàna telo lehibe indrindra ho an'ny mpandeha fialantsasatra dia ao New York, Los Angeles ary Atlanta.
Ny fitohanana dia andrasana ny alarobia sy alakamisy maraina. Ny andro fitsangatsanganana be atao indrindra dia ny 23 Desambra manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 9 maraina ary ny 24 Desambra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana.
Raha misy fanapahan-kevitra lehibe tokony horaisina toy ny hoe hankalazana ny fety manokana na saika amin'ity taona ity, ny manam-pahaizana momba ny dia dia manoro hevitra ny hanaraka ny torolàlana momba ny foibe fanaraha-maso sy fisorohana aretina ary hijanona ho vaovao miaraka amin'ny lalàna COVID-19 eo an-toerana sy ny fameperana hahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra ho anao. sy ny olon-tianao.